Sie hören Corona Information Vienna - Somali Edition [Macluumaadka Corona Vienna]
23.11.20Xilliga shaqada gaaban ee karoona.
06.10.20Maxay yihiin kalarada iftiinka ee loo yaqaan AMPEL?
14.06.20Qaybta farad ee taxanaha.
14.06.20Shaqooyinka lagu laabtay.
27.05.20Waxbarashadii waa lagu laabtay.
19.05.20Wareega labaad qeybtiisa koobaad.